Tantara an-tsehatra: Trump sy Kim Jong-un mifanome tanana any Singapaoro
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Tantara an-tsehatra: Trump sy Kim Jong-un mifanome tanana any Singapaoro
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • People • Vaovao Mafana Singaporeana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Jona 12, 2018
Tonga tany amin'ny toerana an-tampon'ny Singapore ny mpanao didy jadona Koreana Avaratra Kim Jong-un sy ny filoha amerikana Donald Trump. Ny fivoriana voalohany manan-tantara an'ny roa tonta dia hiresaka momba ny fifanarahana fandriam-pahalemana sy ny famoahana denuclearization an'ny saikinosy Koreana.
Kim dia tonga voalohany tao amin'ny Capella Resort, ao amin'ny nosy Sentosa, Singapore, fotoana fohy talohan'ny 9 maraina tamin'ny ora teo an-toerana. Tsy noraharahainy ireo fakantsary, niditra tao amin'ny hotely izy niaraka tamin'ny solomaso. Ny filoha amerikana dia narahina minitra vitsy taty aoriana, nitodika niatrika ireo fakantsary tamin'ny endrika tsy miandany tsara alohan'ny nidirany tao amin'ilay toerana.
Ny fifanomezan-tànana manan-tantara nataon'ny mpitarika roa tonta talohan'ny sainan'ny saina amerikana sy koreana avaratra dia niseho tamin'ny 9:04. Nitsiky ny filoham-pirenena amerikana ary nametaka ny lamosin'i Kim, nitondra azy nankany amin'ny efitrano fihaonambe. Nilaza i Trump teo aloha fa ho fantany raha hahomby ny fihaonana an-tampony ao anatin'ny minitra vitsivitsy amin'ny fihaonana amin'i Kim.
"Hanana fifandraisana lehibe isika, tsy isalasalana aho," hoy i Trump tao anaty fakana sary fohy.
"Ny fomba fanao taloha sy ny fitsarana an-tendrony dia vato misakana eo amin'ny firosoantsika, saingy nandresy azy rehetra isika ary eto ankehitriny," hoy i Kim. “Marina izany,” hoy i Trump.
Izy roa dia kasaina hihaona mandritra ny adiny roa amin'ny toerana tsy miankina, miaraka amin'ireo mpandika azy ihany.